ရာစုသစ်တွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းတာဝန်ကို စိတ်အားထက်သန်စွာ ထမ်းဆောင်ကြသည့် တရုတ် Gen Z များ - Xinhua News Agency
ပေကျင်း၊ မေ ၁၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ငယ်စဉ်က စေတနာ့ဝန်ထမ်းအစီအစဉ်များကြောင့် အကျိုးဖြစ်ထွန်းခဲ့သည့် လူငယ်တစ်ဦးသည် လက်ရှိတွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်ပြန်လည် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အသက် ၂၀ အရွယ်ရှိ Long Jieyong က ၎င်းငယ်စဉ်က ရရှိခဲ့သည့် မေတ္တာများနှင့် အထောက်အပံ့များကို လက်ဆင့်ကမ်းလိုသူဖြစ်သည်။ ရာစုသစ်တွင် လူငယ်များက တာဝန်ကိုယ်စီလွှဲပြောင်းရယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း သူက ယုံကြည်ထားသည်။ ယခုရုပ်သံထဲတွင် တရုတ်နိုင်ငံမှ Gen Z လူငယ်တစ်ဦး၏ စေတနာ့ဝန်ထမ်း လုပ်ဆောင်မှုကိုမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးထားပါသည်။(Xinhua)
GLOBALink | Gen Z: Serving volunteer work in new era
Fromabeneficiary of volunteer programs toavolunteer, 20-year-old Long Jieyong hopes to pass on the love and support he received when he was little. He believes young people should shoulder their due mission in the new era. #GLOBALink #GenZ